News Collection: 'राजकुमारी'लाई निर्मलनिवासबाट रातारात
'राजकुमारी'लाई निर्मलनिवासबाट रातारात
काठमाडौं। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पहिलोपटक शासनसत्ता हातमा लिएको ठीक ८ वर्षपछि उनको हालको निजी घर निर्मलनिवासमा अर्को दुःखद् घटना भएको छ। सो घटनालाई कतिपय पूर्वराजपरिवार निकटस्थहरूले एकजना दुःखी राजकुमारीको आत्महत्या प्रयास भनेका छन् भने कतिपयलेचाहिँ सामान्य दुर्घटनाका रूपमा मात्र लिएका छन्।
असोज १८ गते मध्यराति निर्मलनिवासमा पूर्वयुवराज्ञी हिमानी, अधिराजकुमारी प्रेरणासहित पूर्वशाहज्यादीहरू पूजा र सिताष्माबीच ड्रिङ्क्सका साथ कुराकानी सकिएपछि सो घटना हुन पुगेको थियो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रकी कान्छी भतिजी दिलाशा उपचारका क्रममा हाल दिल्लीमा रहेका कारण जमघटमा उनको उपस्थिति थिएन। घटनाका कारण पूर्वराजपरिवारका यी महिला सदस्यहरूबीच भागदौड मच्चियो। स्रोतका अनुसार, त्यहाँ भएको घटनाका कारण स्व. धीरेन्द्रकी माहिली छोरी सिताष्माको शरीरमा गहिरो चोट लागेको थियो। त्यसपछि उनका भिनाजु एवं वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका चिकित्सक प्रमुख सेनानी राजीव शाहीलाई बोलाएर सिताष्मालाई उपचारका लागि वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल लगियो। तर, त्यहाँको सिटिस्क्यान मेसिन बिग्रेकाले थापाथलीस्थित नर्भिक अस्पताल पुर्‍याइएको थियो। त्यहाँ लगेर सिताष्माको टाउकाको सिटिस्क्यान गरी राति १ बजे जीवनकुञ्ज फर्काइएको थियो। सिताष्मा तिनै दुःखी राजकुमारी हुन्, जसले दरबार हत्याकाण्डयता लगातार आफ्ना सबै निकटस्थ आफन्तजन गुमाउँदै आएकी छन्। दरबार हत्याकाण्डमा उनका पिता तथा दरबारिया षड्यन्त्रमा परी ०४५ सालमा अधिराजकुमारको पद्वी खोसिएर विदेश धपाइएका धीरेन्द्रको मृत्यु भयो भने त्यसै साल रारातालमा भएको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा आमा प्रेक्षाको निधन भयो। बाबु(आमाको दुःखद् निधनपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले धीरेन्द्र(प्रेक्षाका तीन छोरीको अभिभावकत्व ग्रहण गरे। र, ज्ञानेन्द्रकै अभिभावकत्वमा सिताष्माको अविनेश शाहसँग विवाह भयो। अविनेश दरबारका ज्वाइँहरूमध्ये सबैभन्दा असल मानिन्थे। तर, मुटुरोगका कारण दुई वर्षअघि ३४ वर्षको कलिलो उमेरमा तिहारको भाइटीकाका दिन उनको निधन हुन पुग्यो। यसरी एकपछि अर्को गर्दै पारिवारिक बज्रपात सहादै आएकी सिताष्माले एक्लोपन र यस्तै(यस्तै तनाबका कारण झुन्डिएर आत्महत्या गर्न खोजेको हुनसक्ने एकथरीको अनुमान छ भने जीवनकुञ्जनिकटस्थ स्रोतले चाहिा त्यसदिन हिाड्दै गर्दा सिताष्मा चिप्लेर खुट्टा मर्केको मात्र दाबी गरेको छ। तर, खुट्टा मर्केको बिरामीको टाउकाको उपचार किन गर्न खोजियो? भन्ने प्रश्नको उत्तरचाहिा कसैले दिन सकेको छैन। स्रोतका अनुसार, सो घटना भएपछि सिताष्मा दरबारमार्गमा आफूले खोजेको बुटिकमा पूर्ववत् जान थालेकी छन्। उनी हाल आफ्नी एक मात्र सानी छोरीको मुख हेरेर आफ्ना अनगिन्ती पीडा भुल्ने कष्टसाध्य कोसिस गर्दै छिन्।